Bow | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Umnsalo wokuhlobisa. Ukufaneleka nokunakekelwa okufanelekile
I-anyanisi yokuhlobisa (i-Allium) itshalwe ensimini ukuze ibe nobuhle, iseduze, okushoyo, isihlobo sikagalikhi no-anyanisi, esakhiwe ngokuzalanisa. Ezweni kunezinhlobo ezingaba ngu-600 zama-anyanisi okuhlobisa. Ama-anyanisi adliwa, futhi izimbali zalo ziyathandwa. Lezi yizimbali ezingenakuhlonipha eziqhakaza isikhathi eside.
Izimbangela ze-anyanisi ophuzi kanye nokususwa kwabo
Cabanga ukupheka ngaphandle anyanisi akunakwenzeka. Lesi isithako esiwusizo sisetshenziselwa cishe zonke izitsha: okokuqala, okwesibini, ukubhaka, ekumakheni, ngisho nokukhishwa kwe-red onion marmalade. Ama-anyanisi aphuzi ngenxa yezinambuzane Kubonakala sengathi akukho lutho olulula kunamanisi akhula - lawa akusiwo utamatisi angenangqondo noma ithenda lama-eggplants angaphandle kwamanye amazwe.
Indlela yokukhulisa anyanisi eluhlaza efasiteleni
Kubonakala sengathi kungani sikhula u-anyanisi ekhaya, uma kusendaweni emashalofini cishe noma yisiphi isitolo, ngisho nasebusika ungathenga imifino ehlukahlukene? Kodwa eqinisweni, kulesi sifundo kunezinzuzo eziningi. Imifino eyenziwe ngamakhasimende ingumthombo owengeziwe wamavithamini nezakhi, ihlobisa ukudla ngokumangalisayo, ihlala ihlanzekile futhi iseduze, futhi ibiza cishe mahhala.
Batun bow: ukwakheka, ukusetshenziswa, izakhiwo ezizuzisayo kanye contraindications
I-anyanisi ye-batun inambitheka kakhulu futhi iyasiza kakhulu emzimbeni womuntu. Ezweni lakithi, lokhu ku-anyanisi kukhule futhi kungasetshenziselwa ukupheka kuphela, kodwa futhi kumithi. Kulesi sihloko sizobheka ukuthi yini umnsalo womnsalo nokusebenza kwawo. U-anyanisi-batun: okuqukethwe kwekhalori, ukwakheka kanye nenani lokudla okunomsoco we-Tatarka, u-anyanisi we-sand, i-garlic engenamnandi, i-fistula - wonke lawa magama abizwa ngokuthi anyanisi e-batun.
Ukusetshenziswa kwama-anyanisi aluhlaza: izakhiwo eziwusizo nokuphikisana
Yini engakuhlobisa isidlo esivamile, sinikeze ubukeka obuhle futhi sengeze i-fishcorn elula kune-plane e-green anyanisi? Ngenxa yokulula okulula okukulima (ezweni, ebamba ukushisa, ekhaya efasiteleni), lo mkhiqizo ungadliwa unyaka wonke, ngisho noma iminye imithombo yamavithamini ayitholakali.
Incazelo yezinhlobonhlobo ze-anyanisi batun
Ubani ongathandi ukuzitholela u-anyanisi ovuthiwe etafuleni lokudlela. Ikakhulukazi uma uzikhulisile. Kulesi sihloko sizoxoxa ngezinhlobonhlobo ze-anyan-batun, noma kunalokho, ngezinhlobo zayo ezinhle kakhulu. I-anyan-batun ihluke ku-bulb evamile ekuphakameni kwamaqabunga ayo ama-fistulous nokuntula u-anyanisi. Ama-anyanisi anjalo ahlwanyelwe kuphela ama-greenery.
I-Shallots: amakholori, ukusetshenziswa, izakhiwo ezizuzisayo kanye nokuphikisana
Abaningi bathanda ama-shallots ngenxa yobumnandi bawo obumnene, obunomusa futhi obumnandi, obungabangela iphunga elibi ngemuva kokusetshenziswa. Ngaphezu kwalokho, imifino kanye no-anyanisi abangeke babangele izinyembezi uma zihlutshiwe, ngokungafani no-anyanisi ovamile. Kuyini shallot Ngakho, shallot, kuyini? I-Shallot iyisitshalo esingapheli somndeni we-anyanisi, i-anyanisi eqoqwe ngama-clove, okwenza kubonakale njengegalikhi.
Indlela yokugcina u-anyanisi ebusika
Anyanisi ingenye yezitshalo ezithandwa kakhulu ezikhulayo bonke abalimi, kungakhathaliseki ukuthi kunesimo sezulu noma imvula. Emva kokuvuna inkinga ngokuvamile kuvela nokugcina u-anyanisi. Ukubhekene nenkinga yemikhiqizo ewonakalisiwe, abanikazi bayazibuza: ngakho kanjani ukugcina u-anyanisi ngokufanele ukugwema ukulahlekelwa?
Indlela yokutshala u-anyanisi, imithetho ejwayelekile yokutshala izitshalo
I-anyanisi ingenye yezitshalo ezithandayo kakhulu zamasimu. Nganoma yisiphi isikhathi sonyaka, izonikeza ukunambitheka okwehlukile okuthakazelisayo, zigcwalise ngamavithamini kanye nezici zokulandelela. Kodwa ukuze kuqinisekiswe ukuvunwa okuhle, umhlali wehlobo kufanele azi ukuthi angondla kanjani anyanisi. Uyazi? Ukudla okuvame kakhulu emhlabeni - okungukuthi u-anyanisi.
Ukusetshenziswa anyanisi: izinzuzo kanye nokulimala empilweni
U-anyanisi - isitshalo esingapheli se-anyanisi yomndeni. Izitshalo zasekhaya - eNingizimu-ntshonalanga ye-Asia. Esinye sezilimo zemifino evame kakhulu. It isetshenziswa ekuphekeni, imithi, cosmetology. Uyazi? AmaGibhithe lasendulo abiza u-anyanisi "isitshalo sabonkulunkulu" futhi baqiniseka ukuthi umhlaba wonke wakhiwe emva kwesibonelo se-anyanisi eningi elinezinwele eziningi.
Indlela yokubhekana ngokuphumelelayo ne-anyanisi fly
Iphupho lazo zonke izakhamuzi zasehlobo kanye nezensimu ziyivuno elicebile, elihlwabusayo. Futhi kungaba yini ecasulayo lapho izinambuzane zezitshalo zensimu, imifino echithayo futhi ekunciphiseni kakhulu ukukhiqiza kwazo, zisendleleni yokufeza iphupho. Ngokuvamile kufanele uchithe isikhathi esiningi nomzamo wokuqeda izinambuzane ezicasulayo zisuka kusayithi lakho, usebenzisa izindlela ezihlukahlukene.
Indlela yokukhulisa anyanisi: amathiphu okutshala nokunakekelwa
Amathiphu okuthi ungakhula kanjani u-anyanisi, ewusizo kwabalimi be-novice nabalimi, nakuba kungabathintekayo nabanikazi abanolwazi nabanolwazi. Anyanisi - imifino ebalulekile etafuleni lethu. Akunakwenzeka ukucabanga ezinye izitsha ngaphandle kwakhe. Isetshenziswa esisha, esomisiwe, esetshenziselwa ukwenza ama-sauces, ama-pickle, ama-seasonings, ukulondolozwa.
Umnsalo we-Slyzun: izakhiwo eziwusizo nokuphikisana
Phakathi kwazo zonke izinhlobonhlobo anyanisi, indawo ekhethekile igcwele umnsalo we-slyzun, owaziwa nangokuthi mangyre, drooping, glandular. Kukholelwa ukuthi igama lakhe eliyinhloko lamukelwa ngokukhethwa kokusebenza kwejusi lapho usika izitshalo. Bathi kufana nezinyembezi. Akukhuli nje kuphela njengesitshalo esitshalwe emasimini, kodwa futhi sitholakala endle emhlabathini onogwadule nasemadlelweni aseMpumalanga naseNtshonalanga Siberia.
Ukukhetha izinhlobonhlobo ezingcono kakhulu zama-anyanisi amasethi
Ukutshala imbewu emhlabathini, ukukhula nokuvuna izitshalo ensimini yakho kuyinto ejabulisayo kakhulu. Ukubona okunye kwenqubo yokukhula kudingekile okuthile. Ukuze zonke izithombo zikhule, udinga ukuzinakekela, kodwa kubalulekile ukukhetha imbewu efanele. Esinye sokuqala ukungena emhlabathini yi-anyanisi entwasahlobo. Kunezinhlobo eziningi zezinhlobo zemifino, futhi ngezansi yizinhlobo ezinhle kakhulu zezithombo ze-anyanisi.
Lapho ukumba anyanisi, ukuhlanza anyanisi kusuka emibhedeni
Ubuningi kanye nekhwalithi yesitshalo esivunyiwe, kanye nokuthi uzogcinwa isikhathi esingakanani, kuxhomeke ekutheni ukuvunwa okufanele kwe-anyanisi. Yilokho esizoxoxa ngakho kulesi sihloko. Lapho imifino isuswa emibhedeni Njengemifino eminingi, anyanisi kufanele isuswe uma sesivuthiwe ngokugcwele. Kuphela kulokhu, singathembela ukulondolozwa kokunambitheka nokugcina isikhathi semifino.
I-anyanisi Exhibition ngaphandle kwezithombo: ukukhula ngaphandle kokuhlupheka
Ayikho ingadi engenza ngaphandle anyanisi. Izinhlobonhlobo zembukiso yinto ethandwa kakhulu. Bred it in Holland. Yibonge nge ukunambitheka kwayo okuhle, isivuno kanye nosayizi omkhulu. Lesi sihloko sigxile kwi-onion ye-Exibishen futhi ekukhuliseni ngembewu ngendlela engenambewu. Incazelo kanye nezici I-bulb yalezi zihlukahlukene zinkulu kakhulu, ingafinyelela ubukhulu kusukela ku-120 kuya ku-400 g.
Izinhlobo zama-anyanisi zokutshala ezweni
Okubaluleke kakhulu ukupheka, kanye nemithi yokwelapha, yinto evamile futhi yansuku zonke yazo yonke imiphumela yokutshala izinhlobo ze-anyanisi nezinhlobonhlobo. Yingakho umlimi wezitshalo noma umlimi wezitshalo ekhula ngokuzikhukhumeza ukuze azijabulise yena nabathandekayo bakhe, hhayi nje kuphela ngokudla okunempilo, kodwa nangomhlobiso omuhle wegadi noma umngcele - kukhona izinhlobo zokuhlobisa zezitshalo ezidliwayo.
Indlela yokuthola isivuno esicebile Exichen
Ngokuvamile bonke abalimi bezwe lethu bakhula u-anyanisi ngezinhlobo ezahlukene noma anyanisi. Enye yezinhlobo ezithandekayo zalesi sitshalo yi-anyanisi e-Exibichene. Indlela yokutshala indlela enjalo yokutshala izitshalo esizoxoxa ngayo kulesi sihloko. Incazelo kanye ne-Characteristics i-Onion Exhibition yathulwa ensimini yezwe lethu kusukela eHolland futhi sekuyisikhathi eside idumile phakathi kwezakhamuzi eziningi zasehlobo.
Indlela yokukhulisa u-anyanisi amasethi ku-Urals
I-anyanisi ingenye yemifino evame ukusetshenziswa kakhulu ekuphekeni. Isici esibalulekile ekutshalweni okuphumelelayo kwalesi sitshalo ezimweni zokulima okulimazayo ukukhethwa kwezihlobo ezifanele futhi ukuzinakekele ngokuqhubekayo. Izinhlobonhlobo ezinhle ze-Urals Izinhlobonhlobo ezinhle ze-anyanisi izithombo ze-Urals yizi: i-Arzamas -lukovitsy ikhula kusuka ku-40 kuya kwangu-80 g, ibe nesimo esihlotshisiwe, umbala ophuzi wesilinganiso esingaphandle, ngaphakathi kumhlophe.